Ngaba wena okanye iqabane lakho linelungelo le -onyony? Law & More kunceda
Umthetho woqhawulo-mtshato » I-Alimony yeQabane
Ngaba wena okanye iqabane lakho elidala alinamali yaneleyo yokuhlala emva koqhawulo mtshato? Ke elinye iqabane linembophelelo yokuhlawula i-onyony kwiqabane lomlingane wangaphambili.
Unelungelo nini ukufumana i -onyony kwiqabane lakho langaphambili? Ngokomgaqo, unelungelo lokulingana ne-alimony ukuba, emva koqhawulo-mtshato, awunayo imali eyaneleyo yokuzixhasa.
FUNA UNOBUCHULEKO UKUQALISA UMNQOPHISO?
> Inqanaba le -onyony yeqabane
> Ukutshintsha i-alimony
Unelungelo nini ukufumana i -onyony kwiqabane lakho langaphambili?
Ngokomgaqo, unelungelo lokulingana ne-alimony ukuba, emva koqhawulo-mtshato, awunayo imali eyaneleyo yokuzixhasa. Imigangatho yakho yokuphila ngexesha lomtshato iya kuthathelwa ingqalelo ukuze kuqinisekiswe ukuba unelungelo lokulingana ne-alimony. Ngokuziqhelanisa, elinye lamaqabane omabini liya kufumana ilungelo le-alimony. Kwiimeko ezininzi lo ngumfazi, ngakumbi ukuba inoxanduva lokugcina ikhaya nabantwana. Kwimeko enjalo, umntu obhinqileyo uhlala engenamali okanye ingeniso inqongopheleyo yengqesho yexeshana. Kwimeko apho indoda sele iyifezile indima 'yendoda yekhaya' kwaye owasetyhini wenze umsebenzi, indoda inokuthi ibambe iqabane kwi -onyony.
Ukuqhawula umtshato lixesha elinzima. Sikunceda kuyo yonke le nkqubo
Inqanaba le -onyony yeqabane
Ngothethwano, wena neqabane lakho langaphambili lingavuma malunga nesixa se-alimony yeqabane. Ukuba awukwazi ukufikelela kwisivumelwano kunye, elinye lamagqwetha ethu angakuvuyela ukukunceda. Ayisiyiyo kuphela indawo esinokukunceda ngayo kwinkqubo yothetha-thethwano, kodwa sinako ukufumanisa ubungakanani be-alimony yeqabane lakho. Senza oku ngokwenza ubalo lolondolozo.
Ijaji ayiyi kujonga kuphela imeko yezemali yomamkeli wesondlo, kodwa nakwimeko yemali ehlawula isondlo. Kwisiseko sezo meko zombini, inkundla iya kugqiba ukuba omnye wakho unelungelo lokufumana i-onyony kwaye, ukuba kunjalo, inani le-alimony. Ngamanye amaxesha, kunokwenzeka ukuba unelungelo lokongiwa kweqabane, kodwa ke iinkcukacha zezezimali zeqabane lakho langaphambili zibonakalisa ukuba akakwazi ukuhlawula i -onyony yeqabane.
Ukubala ubalo lolondolozo lubalo oluntsonkothileyo kuba izinto ezininzi kufuneka zithathelwe ingqalelo. Law & More uya konwaba kukuphumeza ukubalwa kwe -onyony yeqabane lakho. .
Isixa se -onyony iqabane lixhomekeke kwisidingo somntu ofumana i-onyony kunye nomthamo womntu oza kuhlawula i-onyony. Ukuchonga iimfuno zomamkeli we-alimony, umgangatho omalunga ne-60% yemali yengeniso yosapho kwiindleko zabantwana zithathwa.
Ukuchonga ubungakanani bemali
Ukubala umthamo wokubala kwenziwa kuwo omabini amaqela. Oku kubalwa kumisela ukuba umntu onoxanduva lolondolozo unakho ngokwaneleyo ukuba akwazi ukuhlawula i-alimony. Ukwenzela ukumisela ubungakanani bemali yomntu ekufuneka ehlawule i -onyony, umvuzo wakhe wokuqala kufuneka uzimisele. Umntu ohlawula i-alimony ungaqala ngokurhola inani leendleko kulo mvuzo. Ezi ziindleko ikakhulu ekufuneka ahlawule umrholanisi ukuze azifezekise (iindleko).
Ukuthwala umthamo wokuthelekisa
Okokugqibela, kufuneka kuthelekiswe umthwalo ophethe umthwalo. Olu thelekiso lusetyenziselwa ukubala inani lolondolozo apho amaqela anenkululeko yemali elinganayo. Ubungakanani bemali egciniweyo yesondlo ithelekiswa nomgangatho womtyali wesondlo. Umbono ongemva koku kukuba umbolekisi wesondlo akufuneki abe ekwimeko engcono yezemali kunetyala lesondlo ngenxa yentlawulo yesondlo.
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba injani imeko yakho yezemali emva koqhawulo mtshato? Unxibelelwano Law & More kwaye sinako ukusebenza kunye nawe ukumisela ukuba ingakanani i-onyony ekufuneka uyihlawule okanye eyamnkela.
Ukuba ufuna ukurhoxisa ngaphandle kobunye okanye ukutshintsha i -onyony yeqabane, oku kufuneka kwenziwe kwinkundla. Singasifaka isicelo sokutshintsha kwinkundla egameni lakho. Inkundla inokutshintsha i -onyony yeqabane, okt ukonyusa, ukunciphisa okanye ukusetha ukuya kwi-zero. Ngokomthetho, kufuneka ke kubekho 'utshintsho lweemeko'. Ukuba inkundla ifumene ukuba akukho tshintsho kwiimeko, isicelo sakho asiyi kuvunywa. Le ngqondo ayichazwanga ngakumbi emthethweni kwaye ke inokuchaphazela uluhlu olubanzi lweemeko. Xa uziqhelanisa, oku kudla kubandakanya utshintsho kwiimeko zezimali zomnye wabalingane bakhe bangaphambili.
Ukupheliswa kwe -onyony yeqabane
Uxanduva lokuhlawula i -onyony kwiqabane lingaphela kwezi meko zilandelayo:
Kwimeko yokusweleka kweqabane lakho okanye iqabane lakho;
• ukuba elona xesha liphezulu lolondolozo elimiselwe yinkundla liphelile;
Ukuba umntu owamkela umtshato wesondlo uyaphinda futhi, ungena kwintsebenziswano ebhalisiweyo okanye uqala ukuhlala kunye;
Ukuba iimeko zezezimali zitshintshile kwaye umntu owafumana isapoti unokuziphilisa